Col. Maxamed Cali Khalaf oo saakay lagu dilay agagaarka Baar Ubax, Dad isugu jira rayid iyo maleeshiyaad laga raray Puntand oo doomo Kismaayo lagu keenay iyo xaaladda wadada isku xirtay Xamar iyo Marka oo go'day ammaan darro darteed. Ruunkinet 03/02/07
Nin lagu magacaabo Col. Maxamed Cali Khalaf oo ka tirsan ciidamada Booliiska dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa saakay lagu toogtay agagaarka Baar Ubax ee magaalada Muqdisho.
Col. Khalaf ayaa la sheegay in uu la shaqeynayay dowladda ku joogta Xamar taageerada ciidamada Itoobiya ee ku soo duulay koonfurta Soomaaliya.
Muddooyinka dambe ayaa Muqdisho lagu ugaarsanayay ciidamada Booliiska iyo kuwa militariga ah ee la shaqeeya xukuumadda madaxweyne Yuusuf.
Dhanka kale, wararka ka immaanaya magaalada Kismaayo ayaa ku waramaya in dad badan oo isugu jira maleeshiya aad u hubeysan iyo dad rayid ah oo qoysas ah oo laga soo daabuleenaya gobollada Puntland in ay ku soo ququlayaan magaalada Kismaayo iyo goobo kale oo ka tirsan Jubbada Hoose.
Dadkan ayaa la sheegay in ay itooba badani ku immaanayaa magaalada Kismaayo doomo.
Arrintan ayaa la sheegay in ay la xiriirto qorshe madaxweynaha Soomaaliya iyo taageerayaashiisa ay ku doonayaan in Kismaayo lagu soo celiyo awood waarta oo ay Kismaayo ku lahaadaan reer Puntland taaso gacanta ka baxday intii ka dameysay dagaallada sokooye ee Soomaaliya.
Warka ayaa intaasi ku daraya in madaxweyne Cabdullahi Yuusuf uu doonayo in uu saldhig ka dhigto magaalada Kismaayo.
Dhinaca kale, wadada u dhexeysa magaalada Muqdisho iyo Marka ayaa la sheegay in ay xirantay kagadaal markii burcad hubeysan ay ku soo bateen wadadaasi.
Burcaddan ayaa la sheegay in ay u geystaan dhibaatooyin badan rakaabka mara wadadaasi.